Ithempeli likaArtemis, ngamanye amaxesha elibizwa ngokuthi i-Artemisium, laliyindawo enhle yokunqula, eyakhiwa malunga ne-550 BCE kwisixeko esisisityebi sase-Efese (esiseNtshonalanga yeTurkey). Xa isikhumbuzo esihle satshiswa phantsi kweminyaka engama-200 kamva ngu-Herostratus we-arsonist ngo-356 BCE, iThempeli lika-Arthemisi laphinda lwakhiwa kwakhona, njengoko likhulu kodwa lincomeke kakhulu. Yayiyinto yesibili yeTempile kaArtemis eyanikezelwa indawo phakathi kweMveli yeMveli yeMveli yehlabathi .
Ithempeli likaArtemis laphinda litshabalaliswa ngo-262 CE xa amaGoth ahlasela i-Efese, kodwa okwesibini awakhiwe kwakhona.
Kuba amaGrike amandulo, uArtemis (owaziwa ngokuba ngumthikazi ongumRoma waseDiana), udadewabo we- Apollo , owayengumama, onempilo, oyintombikazi yokuzingela kunye nezilwanyana zasendle, edlalwa ngesaphetha notolo. E-Efese, nangona kunjalo, kwakungeyona nje isixeko saseGrike. Nangona yayisungulwe ngamaGrike njengekholoni e-Asia Minor malunga ne-1087 BCE, yaqhubeka ithonyelwa ngabemi bokuqala bendawo. Ngaloo ndlela, e-Efese, unkulunkulukazi ongumGrisi uArtemis wahlanganiswa nomfazi wendawo yobuhedeni, u-Cybele.
Imifanekiso embalwa ehleliyo ka-Arthemisi yase-Efese ibonisa umfazi omiyo, enemilenze yakhe ehlangene kunye kunye neengalo zakhe zingaphambi kwakhe. Imilenze yakhe yayifakwe ngokukhawuleza kwengubo ende ehlanganiswe nezilwanyana, ezinjengeengqumbo neengonyama. Ngentamo yakhe yayingumgca weentyatyambo kunye nentloko yakhe yayingumkhwa okanye i-headdress.
Kodwa yintoni eyona nto yayithethiwa yimizi yakhe, eyayihlanganiswa nenani elikhulu lamabele okanye amaqanda.
U-Arthemisi wase-Efese wayengenguyekazikazi onokuzala, wayengunobuncwane bodolophu. Ngaloo ndlela, uArtemis wase-Efese wayedinga itempile efanelekileyo.
Ithempeli lokuqala likaArtemis
Ithempeli lokuqala lika-Arthemisi lakhiwa kwindawo eninzi eninzi eyayibanjwe ingcwele ngabantu.
Kukholelwa ukuba kukho ubuncinane uhlobo oluthile lweetempile okanye indawo engcwele apho ubuncinane ngo-800 BCE. Nangona kunjalo, xa uKumkani uCroesus waseLydia onotyebileyo ehlasela uLadia ngo-550 BCE, walela ukuba kwakhiwe ithempile elitsha, elikhulu, elincomekayo.
Ithempeli likaAtemisi laliyinqaba enkulu, eyinxantathu eyenziwe ngemarbo emhlophe. Ithempeli lalingama-350-ubude ubude kunye neenyawo ezili-180 ububanzi, likhulu kunelo xesha, i-American football-field field. Kodwa oko kwakunomdla okwenene ngokwenene, ukuphakama kwayo. Iikholoni eziyi-127 ze-Ionic, ezazisungulwa kwimigangatho emibini yonke ijikeleze isakhiwo, zafikelela kuma-60 aphezulu. Kwakukho phantse kabini ngaphezu kwamakholomu eParthenon e-Athene.
Ithempeli lonke lalifakwe kwiimifanekiso ezimnandi, kubandakanywa iikholam, ezazingavamile kwixesha. Ngaphakathi kweTempile kwakukho umfanekiso ka-Artemis, okholelwa ukuba ubukhulu bomhlaba.
Kwiminyaka engama-200, indlu ka-Arthemisi yayihlonishwa. Abahambi bahamba ngeendlela ezide ukuya kubona iTempile. Iindwendwe ezininzi zaziza kunika umfazi onobubele. Abathengisi babeza kwenza izithixo zohlobo lwabo baze bathengise kufuphi neTempile. Isixeko sase-Efese, isixeko esisechwepheni esiphumelele, ngokukhawuleza saba nobutyebi kwizokhenketho ezalethwa yiNdlu.
Emva koko, ngoJulayi 21, ngo-356 BCE, indoda ebizwa ngokuthi nguHerstrstratus yafaka umlilo kwisakhiwo esihle, ngenjongo yodwa yokufuna ukukhunjulwa kuyo yonke imbali. Ithempeli lika-Arthemisi lashisa. Ama-Efese kunye phantse ihlabathi lonke lakwadala lathinjwa ngolo hlobo lwesibindi, isenzo esingcolileyo.
Ngoko ukuba isenzo esinjalo esingalunganga sasingeke senze uHerstratus udumileyo, ama-Efese avimbela nabani na ukuba bathethe igama lakhe, ngesigwebo sokufa. Naphezu kwemizamo yabo engcono, igama likaHerstrstrus liye lahlelwa kwimbali kwaye liyakhunjulwa ngaphezu kweminyaka engama-2,300 kamva.
Ingqungquthela ithi uArtemis wayexakekile kakhulu ukuba angammiseli uHerstratus ekutshiseni ithempile yakhe kuba wayenceda ngokuzalwa kukaAlexandro Omkhulu ngaloo mini.
Ithempeli lesiBili likaArtemis
Xa ama-Efese ahlenga phakathi kweengqungquthela zeTempile ka-Arthemisi, kuthiwa bafumana umfanekiso ka-Arthemisi ongenamdla kwaye ongenakonakala.
Ukuthatha oku njengophawu oluhle, amaEfese afungela ukuvuselela itempile.
Akucaci ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukuvuselela, kodwa kuthatha iminyaka emininzi. Kukho ibali lokuba xa uAlexander Omkhulu efika e-Efese ngo-333 BCE, wazinikela ekuncedeni ukuhlawula ukuvuselelwa kwethempelini, nje ngokuba igama lakhe laliza kubhalwe kuso. Ngentlonelo, abase-Efese bafumana indlela yokucetyiswa ngokukhupha isipho sakhe ngokuthi, "Akufanelekile ukuba omnye uthixo akakhele ithempeli omnye uthixo."
Ekugqibeleni, ithempeli lesibini lika-Aritemis lagqiba, lilingana okanye lide lide ubukhulu kodwa lugqithise kakhulu. Ithempeli lika-Arthemisi laliyaziwayo kwihlabathi la mandulo kwaye yayiyiindawo ezininzi zonqulo.
Kwiminyaka engama-500, indlu ka-Arthemisi yayihlonishwa kwaye yahanjelwa. Emva koko, ngo-262 CE, iGoths, enye yezizwe ezininzi ezisenyakatho, yahlasela i-Efese yachitha iThempeli. Ngeli xesha, kunye nobuKristu ekunyuseni nasekukhulekeleni kukaArtemis ekunciphiseni, kwagqitywa ukuba ayiyi kuphinda yakhiwe indlu.
Ngokudabukisayo, iingxuwa zethempile kaArtemisi zagqitywa, zaza zithathwa ngeemarble nezinye izakhiwo kuloo ndawo. Ngokuhamba kwexesha, umlambo apho kwakhiwa khona iThempeli yakhula kakhulu, ithatha ininzi kweso sixeko esisizikhulu. Ngo-1100 CE, abambalwa abemi base-Efese babesele belibala ukuba iTempile ka-Arthemisi yayikhona.
Ngomnyaka we-1864, iMyuziyam yaseBrithani yaxhaswa nguJohn Turtle Wood ukuba avule loo ndawo ngethemba lokufumana iindawo zokubhujiswa kwethempeli likaArtemis. Emva kweminyaka emihlanu efuna, uMthi wafumana i-Aritem ehlala phantsi kweenyawo ezingama-25.
Kamva abaphengululi beemvubukulo baye baqhuba iindawo, kodwa akukho nto ifunyenwe. Isiseko sihlala apho njengoko kukho ikholamu enye. Izinto ezimbalwa ezenziwe zifunyenwe zithunyelwa kwiMyuziyam yaseBrithani eLondon.
I-Torque e-Physics - Inkcazo kunye neMzekelo